Uyifumana njani iNkulumbuso yasimahla? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Uyifumana njani inkululeko yasimahla yeTwitch?
Abaninzi kufuneka babe sele benolwazi malunga neTwitch, liqonga elivumela usasazo oluphezulu kakhulu, abantu abaninzi bayalisebenzisa ukuze abasebenzisi bonwabele imixholo eyahlukeneyo enomdla, njengokupheka, umculo okanye enye eyinjini yevidiyo yeqonga. imidlalo. Ukuba lilungu loluntu lwaseTwitch kwi-Intanethi, akukho mfuneko yokuba unikele ngemali kwaphela.
Kodwa kukho ukhetho olubizwa ngokuba yi "Twitch Prime", Yinguqulelo yenkonzo yobhaliso, apho abantu abaqeshayo befumana izibonelelo ezithile ezinomdlaNgokungafaniyo nabasebenzisi abaqhelekileyo. Kule nqaku, ungayibona njani ukuba uyifumana njani, kunye nezinye izinto kunye nezibonelelo zokufumana olu hlobo lweTwitch.
Twitch prime akhawunti yonke into ofuna ukuyifumana
Okwangoku kuyinto eqhelekileyo kwiinkonzo ezininzi ze-Intanethi ukuba neenguqulelo ezimbini, enye yasimahla enye intlawulo, njenge yimeko ye; I-YouTube, iSpotify, iCcleanner, njl. Oku kusebenza kubasebenzisi be-intanethi ukuba bajonge inkonzo yasimahla kwaye emva koko bathathe isigqibo sokuba bafuna ukufumana izibonelelo ezipheleleyo zeapp.
Ngokumalunga nokusebenzisa iTwitch kwifomu yasimahla, ufumana amandla okuyisebenzisa kwaye wonwabele zonke iintlobo zemijelo ngaphandle kwendleko, nokuba wenze iakhawunti, awudingi kuhlawula nantoni na. Kodwa Inkqubo yentlawulo ekhoyo kukuphucula amava ngaphakathi kweqonga usasazo ngqo.
Ngokukhetha ukusebenzisa olu khetho, akusekho malunga neTwitch, njengoko iakhawunti iya kudibana ne-Amazon Prime, ivumela abasebenzisi ukuba bazuze. Kwenzeka njani ukuba ufumane imidlalo yasimahla ngenyanga, enye into ekufuneka uyigcinile engqondweni kukuba ngaphambi kokuba inkonzo yaziwe ngegama "iTwitch Prime" kwaye ngoku ibizwa ngokuba yi 'Prime Gaming ".
Iindleko zeTwitch Prime okanye iNkulumbuso yeGaming
Le nkonzo ifakiwe kuphela kwi-Amazon Prime subscription xa umntu eseSpain, oko kuthetha ukuba kwanele ukuhlawula zonke iinkonzo zeli qonga ukuze ufumane ezi zibonelelo. Kodwa kubantu abangenazo ezi nkonzo, kunokwenzeka ukuba ufumane isilingo sasimahla kwinyanga enye, Apho unokugcina khona inkonzo kamva, 3. I-99 yeerandi kufuneka ihlawulwe qho ngenyanga.
Ukongeza, kuya kuvunyelwana ngezibonelelo ezininzi, ezinje ngemixholo eyahlukeneyo ekhethekileyo, imidlalo yasimahla, ukungeniswa okukhawulezileyo, kunye nosasazo ngqo olungenasiphelo ngokhetho oluphambili lwevidiyo. Ukuba uqwalasela ukhetho lwe "Prime video", ikwaqulathe ezinye izibonelelo, umzekelo:
Ukufikelela kumxholo womdlalo wevidiyo ekhethekileyo kwaye ikhethekileyo, ngaphandle kwendleko ezongezelelweyo.
Uthotho lweempawu ezizodwa ezigciniweyo yenzelwe kuphela amalungu enkonzo agciniweyo.
Iindlela ezahlukeneyo zokwenza ngokwezifiso, ezinjengemibala yengxoxo, kubandakanya ukulungiswa kwengxoxo.
Ukugcina izinto ezikhutshwayo ezindala ezinokujongwa kwiintsuku ezingama-60 eziqhubekayo zomhla wokukhutshwa kwazo.
Kukho iindlela zokufumana inkonzo yasimahla okwethutyana, oku ngeendlela ezimbini. Eyokuqala kukulungiselela iinkonzo zeAmazon Prime ezenziwa yiakhawunti yeTwitch ngaphandle kwendleko. Indlela yesibini yile zama inkonzo ngeentsuku ezingama-30 zasimahla, kodwa oku kuyimfuneko ukunxibelelana neakhawunti.
1 Twitch prime akhawunti yonke into ofuna ukuyifumana
1.1 Iindleko zeTwitch Prime okanye iNkulumbuso yeGaming
2 Ukudibanisa simahla